MOSQUEE 67HA ATSIMO : Nisy namaky ny fitehirizana entana, mampiahiahy ny toerana nanafenana ireo entana
Nitrangan-javatra mampiahiahy indray eo anivon’ny Mosquée 67ha Atsimo ankehitriny. Ny trano fitahirizana entan’ny fiangonana mihitsy no nisy namaky tamin’ny alarobia 5 septambra lasa teo. 11 septembre 2019
Entana maro no very tamin’izany. Tsy re tsaika ny nanatanterahan’ireo nahavon-doza ny halatra fa ilay trano fitahirizana entana efa nivoha ny andro maraina no nanaitra ireo kaomity mpitantana eo anivon’ny Mosquée. Taty aorian’ny nisehoan’izany tranga izany dia nahazoana vaovao ny toerana nanafenana ireo entana nangalarina izay toeram-pianarana ao ambadiky ny Mosquée ihany ary isan’ireo fianakaviam-ben’ny mpino silamo ihany ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’io sekoly io.
Mampiahiahy tanteraka anefa ny zava-mitranga satria hatramin’izao raha mikasa ny hanao fisavana ao amin’io sekoly io ireo kaomitim-piangonana dia tsy mety tanteraka hatramin’ny farany izany na dia mandeha manaraka ny ara-dalàna aza. Fantatra mantsy fa raha nahare ireo tompon’andraikitry ny Mosquée ao amin’ilay sekoly no nanafenana ireo entana halatra, avy hatrany dia naka taratasy manome alalana hanao fisavana (mandat de perquisition) tany amin’ny tribonaly izay ny solontena voalohany tonian’ny mpampanoa lalàna no nanao sonia hampanan-kery an’ilay taratsy fahazoan-dalàna.
Ny alatsinainy teo no nikasa hanao ny fisavana ireo tompon’andraikitry ny Mosquée izay efa niaraka tamin’ny vaditany (huissier) izy ireo mba hampanara-dalàna an’ilay fisavana hatao. Tsy tanteraka izany satria voalaza fa tsy tao ny fanalahidin’ny trano. Teo anefa dia efa nipetraka ny ahiahy, raha ny lalàna manokana ho an’ny fisavana efa manaraka ny ambaratongam-pahefana tahaka izao dia azo atao avy hatrany ny miditra ao amin’ilay toerana mampiahiahy na tsy misy fanekena avy amin’ilay tompon-trano aza. Tsy vitan’izay fa rehefa niverina tany indray ilay vaditany ny talata niaraka tamin’ireo kaomitin’ny Mosquée dia nisy taratasy hafa indray nilatsaka fa nofoanan’ny tonia mpampanoa lalàna, hono, io taratasy fahazoan-dalana hanao fisavana io.
Marihina fa nanomboka tamin’ny zoma ka hatramin’ny omaly dia nanao fiaretan-tory ireo tompon’andraikitry ny Mosquée mba tsy hahafahan’ireo olon-dratsy mamindra an-tsokosoko ireo entana halatra giazana ao amin’ilay toerana voatondro. Manjavozavo tanteraka ny fandehan’ny raharaha hatreto. Mapametra-panontaniana an’ireo voakasiky ny raharaha hoe : fa maninona no sakanana hatrany ny fanaovana ny fisavana ? Raha toa ka tsy misy zavatra afenina ao amin’ ilay sekoly tokony tsy hisy sakana lehibe tahaka izany. Araka ny fantatra dia mbola hisy ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety hataon’ireo kaomity eo anivon’ny Mosquée 67 ha Atsimo mahakasika ity raharaha ity. Andrasana amin’izay ny hisian’ny tohin’ny fampahalalam-baovao misimisy kokoa.